आलम प्रकरणमा नयाँ मोड : जिउँदै इँटाभट्टामा हालिएका ओसी अख्तर विदेशमा रहेको भन्दै श्रीमतीले दिइन् लिखत
रौतहट –कांग्रेस नेता तथा सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमको निर्देशनमा १२ वर्षअघि रौतहट राजपुर फरहदवा–४ मा भएको बम विस्फोट र घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरिएको घटनामा शुक्रबार नयाँ मोड देखा परेको छ ।
विस्फोटपछि इँटाभट्टामा हालेर जिउँदै मारिएका भनिएका ओसी अख्तर विदेशमा रहेको भन्दै उनकी पत्नी अमना खातुनले जिल्ला अदालत रौतहटमा निवेदन दिएकी छिन् ।
२३ जनालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको अभियोगमा हिरासतमा रहेका आलमविरुद्ध अदालतमा थुनछेक बहस जारी रहेकै वेला अमना बयान फेर्दै अदालत पुगेकी हुन् । उनले बिहीबार पति ओसी अख्तरलाई आलमले जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारेको बयान दिएकी थिइन् । तर, शुक्रबार भने अचानक जिल्ला अदालतमा बयान फेर्दै लिखित निवेदन दिएकी हुन् ।
जिल्ला अदालत रौतहटका श्रेस्तेदार गुणराज पराजुलीका अनुसार अमनाले आलमविरुद्ध बयान फेर्दै आफ्ना पति इँटाभट्टमा नमारिएको बरु विदेश गएर नफर्किएको निवेदन दिएको जानकारी दिए । इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएका भनिएका ओसी वैदेशिक रोजगारमा गएर नफर्किएको व्यहोरासहितको निवेदन उनले अदालतमा दर्ता गराएकी छिन् । श्रेस्तेदार पराजुलीले भने, ‘मेरो श्रीमान् विदेशमा गएपछि बा“चेको या मरेको खबर नआएको भन्दै उनी अदालतमा आएकी हुन् ।’
पीडितहरूको पक्षमा बहस गरिरहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले पनि पीडितपक्षका एकजनाले बयान फेर्दै अदालतमा निवेदन दिएको पुष्टि गरे । ‘आलम प्रकरणमा बिहीबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भयो । तर, बहस नसकिँदै एकजना साक्षी बयान बदल्न बेन्च आइपुगे,’ डा. संग्रौलाले भने । डा. संग्रौलाले यसअघि आफूहरूसँगको भेटमा अमनाले पछिल्ला दिन आफू विचलित भएको बताएकी थिइन् । ‘छोराको हत्यारालाई पक्राउ गर्न जाहेरी दिएकी सासु रोक्सना खातुनको पनि हत्या भएपछि आफू विचलित भएको उनले बताएकी थिइन्,’ शुक्रबार अदालतमै आएर बयान बदलिन् ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस प्रकोप : सावधानी अपन...